मर्कूस ६ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
६ अनि उहाँ त्यो ठाउँ छोडेर आफ्नो गृहनगर पुग्नुभयो र उहाँका चेलाहरू पनि उहाँको पछि-पछि लागे। २ अनि जब विश्राम-दिन आयो, तब उहाँले सभाघरमा सिकाउन थाल्नुभयो। उहाँको कुरा सुन्नेहरूमध्ये धेरै जना छक्क परे र यसो भने: “यस मानिसले यस्तो कुरा कहाँबाट पायो? अनि यस मानिसले यस्तो बुद्धि कसरी पायो? यसलाई यस्तो शक्तिशाली कामहरू गर्ने क्षमता कसले दियो? ३ के यो त्यही सिकर्मी होइन? के यो मरियमको छोरा अनि याकूब, यूसुफ, यहूदा र सिमोनको दाइ होइन र? अनि के यसका बहिनीहरू यहाँ हामीकहाँ नै छैनन्‌ र?” त्यसैले तिनीहरूले उहाँमाथि विश्वास गर्न चाहेनन्‌। ४ तब येशूले तिनीहरूलाई भन्न लाग्नुभयो: “भविष्यवक्ताले सबै ठाउँमा आदर पाउँछ तर आफ्नै इलाकामा, आफ्नै नातागोताको बीचमा र आफ्नै घरमा भने पाउँदैन।” ५ त्यसैले उहाँले त्यहाँ केही बिरामीहरूमाथि आफ्नो हात राखेर तिनीहरूलाई निको पार्नेबाहेक अरू कुनै शक्तिशाली काम गर्न पाउनुभएन। ६ हो, तिनीहरूले विश्वास नगरेको देखेर उहाँ छक्क पर्नुभयो। अनि उहाँले गाउँ-गाउँ डुल्दै सिकाउनुभयो। ७ उहाँले बाह्रै जनालाई बोलाउनुभयो र तिनीहरूलाई दुई-दुई जना गरी पठाउन सुरु गर्नुभयो अनि दुष्ट स्वर्गदूतहरूलाई धपाउने अख्तियार पनि दिन थाल्नुभयो। ८ साथै, उहाँले तिनीहरूलाई यात्राको लागि एउटा लौरोबाहेक अरू केही नबोक्न आज्ञा दिनुभयो; न रोटी, न खाजाको पोको, न आफ्नो थैलीमा तामाको पैसा। ९ अनि उहाँले जुत्ता लगाउनू तर दुईसरो लुगा भने नलगाउनू पनि भन्नुभयो। १० साथै, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “जुन घरमा तिमीहरू पसौला, त्यस इलाकाबाट ननिस्केसम्म त्यसै घरमा बस। ११ अनि जुन ठाउँमा तिमीहरूलाई स्वागत गर्दैनन्‌ वा तिमीहरूको कुरा सुन्दैनन्‌, त्यहाँबाट निस्कँदा तिनीहरूलाई साक्षीको निम्ति आफ्नो पैतालाको धूलो टकटकाइदेओ।”* १२ तब तिनीहरू गए र मानिसहरूले पश्‍चात्ताप गर्न सकून्‌ भनी प्रचार गरे। १३ अनि तिनीहरूले धेरै दुष्ट स्वर्गदूतलाई धपाए र थुप्रै बिरामी मानिसलाई तेल घसेर निको पारे। १४ अनि यो कुरा राजा हेरोदको* कानमा पुग्यो, किनकि जताततै मानिसहरू येशूको नाम लिन्थे र तिनीहरू यसो भन्थे: “बप्तिस्मा गराउने यूहन्ना मृत्युबाट ब्यूँतिएछन्‌। त्यसैले त तिनले शक्तिशाली कामहरू गरिरहेका छन्‌।” १५ तर अरूहरूचाहिं यसो भन्थे: “यिनी एलिया हुन्‌।” अनि कोहीचाहिं यसो भन्थे: “यिनी पनि अरू भविष्यवक्ताहरूजस्तै एक जना भविष्यवक्ता हुन्‌।” १६ जब हेरोदले यो कुरा सुने, तब तिनले यसो भन्न थाले: “मैले जुन यूहन्नाको टाउको काट्न लगाएको थिएँ, त्यो ब्यूँतिएछ।” १७ हेरोदले आफ्नो दाइ फिलिपकी पत्नी हेरोदियाससित विवाह गरेका थिए। त्यसैकारण हेरोद आफैले मानिसहरू पठाईकन यूहन्नालाई पक्रेर बाँधी झ्यालखानामा हालेका थिए। १८ यूहन्नाले हेरोदलाई घरीघरी यसो भन्ने गर्थे: “तपाईंले आफ्नो दाइकी पत्नीलाई आफ्नी पत्नी बनाउनु ठीक होइन।” १९ तर हेरोदियासले भने मनमा ईख पालिराखेकी थिइन्‌ र तिनलाई मार्न चाहन्थिन्‌ तर सकेकी थिइनन्‌। २० यूहन्ना परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्ने र पवित्र मानिस हुन्‌ भनेर थाह भएकोले हेरोद तिनीसँग डराउँथे र तिनलाई जोगाइराखेका थिए। तिनको कुरा सुनेपछि हेरोद के गरूँ भनेर अन्योलमा पर्थे, तैपनि तिनको कुरा खुसीसाथ सुन्ने गर्थे। २१ तर हेरोदले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा आफ्ना उच्च पदाधिकारीहरू, सेनापतिहरू* र गालीलका गण्यमान्यहरूका लागि रात्रि-भोज आयोजना गर्दा हेरोदियासले आफ्नो योजना पूरा गर्ने राम्रो मौका पाइन्‌। २२ यिनै हेरोदियासकी छोरी भित्र आइन्‌ र नाचेर हेरोद र हेरोदसँगै खान बसिरहेकाहरूलाई खुसी पारिन्‌। त्यसैले राजाले त्यस ठिटीलाई भने: “तिमीलाई जे इच्छा लाग्छ, मसित माग र त्यो म तिमीलाई दिनेछु।” २३ हो, तिनले कसम खाएर यसो भने: “तिमीले मसित जे मागे पनि म तिमीलाई दिनेछु, मेरो आधै राज्यसमेत।” २४ अनि उनी बाहिर गइन्‌ र आफ्नी आमालाई सोधिन्‌: “म के मागूँ?” तिनले भनिन्‌: “बप्तिस्मा गराउने यूहन्नाको टाउको।” २५ तिनी तुरुन्तै हतार-हतार राजाकहाँ गइन्‌ र यस्तो बिन्ती चढाइन्‌: “बप्तिस्मा गराउने यूहन्नाको टाउको एउटा किस्तीमा राखेर मलाई अहिल्यै दिनुहोस् भन्ने मेरो इच्छा छ।” २६ यो सुनेर राजालाई असाध्यै दुःख लाग्यो तर पनि आफूसित खान बसिरहेकाहरूको अगाडि कसम खाइसकेको हुनाले तिनले उनको इच्छा टार्न चाहेनन्‌। २७ त्यसैले राजाले तुरुन्तै एक जना अङ्गरक्षकलाई पठाए र यूहन्नाको टाउको ल्याउने हुकुम गरे। अनि झ्यालखानामा गएर उसले यूहन्नाको टाउको काट्यो २८ र तिनको टाउको एउटा किस्तीमा राखेर ल्यायो अनि त्यस ठिटीलाई दियो। अनि ठिटीले त्यो टाउको आफ्नी आमालाई दिइन्‌। २९ जब तिनका चेलाहरूले यो खबर सुने, तब तिनीहरू आए अनि तिनको लास लगेर चिहानमा राखे। ३० अनि प्रेषितहरू येशूकहाँ आए र आफूले गरेका सबै काम र आफूले सिकाएका सबै कुराका विषयमा उहाँलाई बताए। ३१ उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरू पनि मसँगै एकान्तमा आओ र अलिकति आराम गर।” किनकि आउने-जानेहरू धेरै भएकोले उहाँहरूले खाने फुर्सतसम्म पाउनुभएको थिएन। ३२ त्यसैले डुङ्गा चढेर उहाँहरू एकान्त ठाउँमा जानुभयो। ३३ तर मानिसहरूले उहाँहरू जाँदै गरेको देखे र धेरै जनाले यो कुरा थाह पाए। अनि सबै सहरहरूबाट आएका मानिसहरू दौडँदै उहाँहरूभन्दा अघि नै त्यस ठाउँमा पुगे। ३४ डुङ्गाबाट ओर्लेपछि उहाँले एउटा ठूलो भीड देख्नुभयो र तिनीहरूलाई देखेर उहाँ टिठाउनुभयो, किनकि तिनीहरू गोठालो नभएका भेडाहरूजस्तै थिए। अनि उहाँले तिनीहरूलाई धेरै कुरा सिकाउन थाल्नुभयो। ३५ यति बेलासम्म दिन ढल्न लागिसकेको थियो। त्यसैले चेलाहरू उहाँकहाँ आएर यसो भन्न थाले: “यो ठाउँ अनकन्टार छ र समय पनि निकै बितिसक्यो। ३६ त्यसैले तिनीहरूलाई पठाइदिनुहोस् र नजिकैका गाउँ-बस्तीहरूतिर गएर तिनीहरूले आफ्नो निम्ति केही खानेकुरा किनून्‌।” ३७ उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरूले नै उनीहरूलाई केही खान देओ।” यो सुनेर तिनीहरूले उहाँलाई भने: “के हामी गएर दुई सय दिनारको* रोटी किनेर यी मानिसहरूलाई खान दिऔं?” ३८ उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो: “तिमीहरूसित कति वटा रोटी छ? गएर हेर त!” पत्ता लगाएपछि तिनीहरूले भने: “पाँच वटा। अनि दुई वटा माछा पनि रहेछ।” ३९ अनि उहाँले सबै मानिसहरूलाई हरियो घाँसमा समूह-समूह बनाएर बस्न अह्राउनुभयो। ४० अनि तिनीहरू सय-सय र पचास-पचासको समूह बनाएर बसे। ४१ त्यसपछि पाँच वटा रोटी र दुई वटा माछा लिई स्वर्गतिर हेरेर प्रार्थना गर्नुभयो अनि मानिसहरूलाई बाँड्नको लागि रोटी भाँचेर चेलाहरूलाई दिन थाल्नुभयो र दुई वटा माछा पनि सबैका लागि भाग लगाउनुभयो। ४२ तिनीहरू सबैले खाए र तृप्त भए। ४३ अनि तिनीहरूले टुक्राटाक्री बटुल्दा बाह्र डालो भरियो र यसबाहेक माछा पनि उब्रेको थियो। ४४ साथै, रोटी खानेहरूमा पाँच हजार पुरुष थिए। ४५ अनि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई डुङ्गा चढेर अघि-अघि तुरुन्तै पारिपट्टि बेथसेदा गइहाल्न कर लगाउनुभयो र आफू भने भीडलाई बिदा गर्न लाग्नुभयो। ४६ तिनीहरूलाई बिदाबारी गरिसकेपछि उहाँ प्रार्थना गर्न एउटा डाँडा चढ्नुभयो। ४७ साँझ परिसकेको थियो र डुङ्गा समुद्रको बीचमा थियो तर उहाँ भने डाँडामा एक्लै हुनुहुन्थ्यो। ४८ अनि विपरीत दिशाबाट चलिरहेको बतासले गर्दा तिनीहरूलाई डुङ्गा खियाउन मुस्किल परिरहेको उहाँले देख्नुभयो। त्यसैले रातको चौथो प्रहरतिर* समुद्र माथि-माथि हिंड्दै उहाँ तिनीहरू भएतिर जानुभयो। तर उहाँ तिनीहरूलाई उछिनेर जान चाहनुहुन्थ्यो। ४९ उहाँलाई समुद्रमा हिंडिरहनुभएको देखेपछि चेलाहरूले यो पक्कै दृष्टिभ्रम हुनुपर्छ भन्ठाने अनि तिनीहरू चिच्याए। ५० किनकि उहाँलाई देखेर तिनीहरू सबै विचलित भएका थिए। तर येशू तिनीहरूसित तुरुन्तै बोल्नुभयो र भन्नुभयो: “साहस गर, मै हुँ, नडराओ।” ५१ अनि उहाँ तिनीहरूकै डुङ्गामा चढ्नुभयो र बतास थामियो। यो देखेर तिनीहरूले साह्रै अचम्म माने। ५२ तर रोटीको चमत्कार देखेर पनि तिनीहरूले त्यसबाट पाठ सिक्न सकेका थिएनन्‌ र तिनीहरूको मन अझै बोधो थियो। ५३ तब तिनीहरू पारिपट्टि गनेसरेतमा पुगे अनि डुङ्गालाई नजिकै बाँधे। ५४ उहाँहरू डुङ्गाबाट ओर्लिनेबित्तिकै मानिसहरूले उहाँलाई चिनिहाले ५५ र तिनीहरू त्यस इलाकाको चारैतिर दौडादौड गरे अनि उहाँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ भनेर सुने, त्यही ठाउँमा बिरामीहरूलाई खाटैसमेत पुऱ्याउन थाले। ५६ अनि उहाँ जुन-जुन सहर, गाउँ वा बस्तीमा पस्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ तिनीहरूले बिरामीहरूलाई बजारमा राखिदिन्थे र उहाँको लुगाको किनारा मात्रै भए पनि छुन पाऊँ भनेर बिन्ती गर्थे। अनि जति जनाले छुन्थे, तिनीहरू निको हुन्थे।
^ मर्कू ६:११ * मत्ती १०:१४ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ मर्कू ६:१४ * लूका ३:१ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ मर्कू ६:२१ * वा, “हजार जना सिपाहीको नाइके।”
^ मर्कू ६:३७ * दिनार ३.८५ ग्राम तौल भएको चाँदीको रोमी सिक्का हो।
^ मर्कू ६:४८ * मत्ती १४:२५ को फुटनोट हेर्नुहोस्।